Indlu yaseHomestead kwidolophu yaseSaint Andrews
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguHelen
Le suite yabucala esanda kulungiswa ilungile kubantu abayi-1-2 abajonge ukuhlala kwidolophu entle yolwandle yaseSaint Andrews. Ibekwe kude nesitrato, inendawo yokupaka eyaneleyo, le suite inempahla yangoku ekhululekileyo, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela labucala, kumgama omfutshane wokuhamba ukuya edolophini iSaint Andrews kunye nezinto zayo ezininzi ezibandakanya iindawo zokutyela, iivenkile, iigadi, iimyuziyam, iindlela zokuhamba, iindawo zokulondoloza indalo, iilwandle kwakunye nokulotywa kweminenga kunye nohambo lwangaphandle. Yiza uhlale!
Le suite ine:
- Ikhitshi - lixhotyiswe ngokupheleleyo ngeoveni, imicrowave, itoaster, umenzi wekofu kunye neketile. Izitya, iipani zokucheba, izitya njl zonke zibandakanyiwe. Ngaphantsi kokukhanya kwe-counter. I-Pantry yezinto ezinkulu. Isikhenkcisi kunye nesikhenkcisi.
-Igumbi lokulala-i-bamboo queen foam umatrasi kunye nebhedi enendawo yokugcina eyongezelelweyo, i-sofa ekhululekile, i-closet enkulu kunye neyunithi yokubeka iishelufu, iitafile ezisecaleni kwebhedi ezinamandla ongezelelweyo kunye neendawo zokutshaja ze-USB, izibane ezisecaleni, i-TV yesikrini esicaba (ngentambo kunye neebhokisi ze-intanethi) kunye nomnyango we-barn ngasese. ukusuka kwindawo yekhitshi.
- Igumbi lokuhlambela - ishawa enkulu yokuhamba ngeenyawo, iyunithi yesinki enendawo yokugcina, isipili esikhanyisiweyo ngaphezulu kwe-sink kunye nekhabhathi yokugcina, indlu yangasese kunye nefeni. Indawo yokomisa iinwele, ikhithi yonyango, iitawuli ezisecaleni kunye nezaselwandle zibandakanyiwe.
- Ukungena - ibhentshi yokugcina kunye namagwegwe kwizihlangu kunye needyasi
-Ipatio-ipatio yangaphandle enetafile yebistro kunye nezitulo ezi-2, zilungele ukonwabela ukukhanya kwelanga kwisidlo sakusasa. Ukongeza kukho izitshisi ezi-3 kunye ne-1 yecala le-BBQ enikezelwe kwisuite ukuququzelela amava okutya ngaphandle.
- Ukufudumeza / ukupholisa - iyunithi yempompo yobushushu esebenzayo ibonelela ngolawulo lokusingqongileyo lobushushu.
5.0 ·Izimvo eziyi-117
5.0 · Izimvo eziyi-117
Wamkelekile eSt Andrews - idolophu encinci eselunxwemeni enokuninzi okwenzekayo!
- Downtown-isuite ikumgama oziikhilomitha eziyi-0.5 kuphela ukusuka edolophini yaseSt. Andrews eneendawo zokutyela, iibhari, iiboutiques, iivenkile zezikhumbuzo, iirenti zekayak, ukhenketho lweminenga kunye ne-wharf.
I-Kingsbrae Gardens-igadi zebhotani eziphumelele ibhaso eziziikhilomitha eziyi-0.7 kuphela kude nepropathi, zigcwele ikhefi ngokutya okumnandi kakhulu kunye nevenkile yezipho. Unezindlu zokudlala, izilwanyana kunye nemisebenzi yabantwana. Ikwanayo nebala lemidlalo langaphandle lomculo kunye neminye iminyhadala evulekele uluntu.
-Katy's Cove - ilungele ukuqubha okukhuselweyo okanye ukukhwela inqanawa kunye nolwandle kumgama oziikhilomitha ezi-2 ukusuka kwi-suite.
- Ukuhamba / indalo - iindlela ezininzi zokuhamba ziqala kuphela yimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka kwisuite, ujikeleze umzila wonxweme wedolophu, ukuya eKaty's Cove nangaphezulu kwindlela yeVan Horne ukuya kwiSiqithi sikaMphathiswa. INtaba yeChamcook ekufuphi (iikhilomitha ezi-6) yeembono ezimangalisayo zendawo kunye neLake (i-8 km). I-Pagan Point Nature Reserve (i-0.6 km) kunye neBlockhouse yembali (i-1.6 km) nayo inika amathuba okuhamba ngolwandle.
-ISiqithi sikaMinister's - sifikeleleka ngendlela ehamba ngamaza, esi siqithi sinendlu enkulu eyimbali, ishedi, iindledlana eziselunxwemeni kunye nezingaphakathi elizweni ezifanelekileyo ukuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile.
- Iimyuziyam / iigalari - iMyuziyam yaseRoss ekufuphi (0.5 km), iSheriff Andrews House (0.5km), ithala leencwadi (0.5 km), iMyuziyam ye-Oppenheimer-Prager (ikhilomitha eyi-1.5) kunye neZiko lezoBugcisa neNdalo iSunbury Shores linegalari enemiboniso kunye nezifundo ze abantu abadala, abafikisayo kunye nabantwana (0.9 km)
- I-Aquarium - i-Huntsman Aquarium (i-3.5 km) kunye namaxesha emihla ngemihla yokutya kwezilwanyana
-Algonquin resort - ihotele (enendawo yokutyela kunye nemisitho) yi-1 km ukusuka kwisuite kunye neAlgonquin Golf Course yi-2.5 km kude
Igrosari - SaveEasy Supermarket yegrosari eqhelekileyo (0.55 km) kunye neSpice Box yegrosari, iimpahla ezithambileyo kunye neemveliso zendalo (0.75 km). Amafama entengiso kwisikwere esikhulu ehlotyeni rhoqo ngolwesine kusasa kude kube ngu-1pm.
Ukufumana ulwazi lwemihla ngemihla ngeziganeko eSt. Andrews bona https://standrewsbythesea.ca/festivalsevents/events-calendar/
Nceda usibhalele ukuba kukho into oyifunayo. Sihlala kwindlu esecaleni kwepropathi kwaye sikufutshane kuyo nayiphi na imibuzo onokuthi ube nayo ukwenza ukuhlala kwakho konwabe ngakumbi.